यी सुन्दरी, जसको फोटोमै मख्ख पर्छन्, भेट्दा...
निशान न्युज बैसाख ११, 2077
काठमाडौं । हरेका मान्छेलाई सुन्दरता मन पर्छ । त्यसमा पनि पुरुष सुन्दरी महिलालाई देख्दा पनि मोहित बन्छन् । यो एथार्थ पनि हो । सुन्दरताले मानिसलाई आफुतिर आकर्षित गर्छ । सुन्दरताका कारण पछिल्लो समय भाइरल बनेकी सुन्दरी हुन्अमेरिकी रोमानियन अभिनेत्री ओना ग्रेगरी । जम्मा २३ वर्षकी यी सुन्दरीलाई उनको ड...
२८ वर्षकै उमेरमा १३० जनासँग सेक्स !
बैसाख १०, 2077 काठमाडौैं । एक २८ वर्षीया महिलाले अन्तर्वार्ताका क्रममा आफूले १३० जनासँग यौन सम्बन्ध राखिसकेको खुलासा गरेकी छन् । तर उनले यति धेरै पुरूषहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेका कारण मानसिक र शारीरिक रूपमा समेत क्षति भोग्नुपरेको बताएक...
यी महिला, जसको छ एउटा शरीरमा दुई मान्...
बैसाख ५, 2077 शरीर एउटा, टाउको र भावना दुई व्यक्तिकै तर एउटा शरिर छ भन्ने सुन्दा जो कोहीलाई सजिलै विश्वास लाग्दैन । र असत्य भन्ने लाग्छ तर यो सत्य हो । यतिसम्मकी उनीहरु एकआपसमा मज्जाले गफ गर्छन् भने खाना पनि फरक फरक खान्छन् । खाने हात ...
नग्न महिलाले लकडाउन तोड्न पुलिसको कार...
बैसाख ४, 2077 काठमाडौं । स्पेनकी एक महिला, जसले लकडाउनको समयमा आफ्नो हर्कत देखाएकी छन्, जुन हर्कतले हंगामा नै मञ्चिएको छ । थपडी बजाउनका लागि लकडाउन तोडेर सडकमा निस्किएकी महिलालाई पुलिसले अदालत लगेको थियो । स्पेनमा लकडाउनलाई पूर्ण पालना...
महिलाले सच्याउनैपर्ने यी ५ गुण, जुन न...
बैसाख ४, 2077 काठमाडौं । भनिन्छ नारी बत्तिस लक्षणयुक्त हुन् । तर, सबै बत्तिसलक्षणयुक्त हुँदैनन् र सम्भव पनि हुँदैन । राम्रो स्वभाव भएका स्त्री भयो भने पतिको जिबन एकदम राम्रो हुन्छ । अनि त्यसै गरि राम्रो स्वभाव भएको पति भयो भने पनि स्त्र...
यी चर्चित अभिनेत्री, जो २५ बर्षसम्म प...
बैसाख ४, 2077 मुम्बई । बलिउड संसार दुनियाँकै लागि अति रोचक र चमत्कारीक छ । सर्वाधिक चर्चित अभिनेत्री त्यो पनि २५ बर्षसम्म कसरी पुरुषको शरिरमा । कसरी भयो पुरुषपछि सर्वाधिक चर्चित अभिनेत्री ? बलिउडमा चलचित्रहरूमा नयाँ कथाहरू पर्दामा आउँछ...
लामखुट्टेले पनि छोड्दैन रक्सी पिउनेलाई
बैसाख ३, 2077 काठमाडौं । रक्सी पिउने मानिसलाई लामखुट्टेले बढी टोक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । रक्सीमा हुने अक्टानल नामक रसायनका कारण रक्सी पिएको मानिसलाई लामखुट्टेले बढी टोक्ने अध्ययनले देखाएको हो । सामान्तया मानिसले सास फेर्दा निस्कने ...
आफुसँग यौनसम्पर्क राख्नेलाई ५ सय युरो...
असार ३, 2076 काठमाडौँ । युवतीले आफुसँग यौनसम्पर्क राख्ने युवालाई ५ सय युरो दिने घोषणा गरेकी छन् । रामानीयाकी ती युवतीले इन्टरनेटमा आफ्नो तस्बिर राख्दै उनले लेखिन मलाई गर्भवती बनाए ५ सय युरो दिन्छु ।२५ वर्षीया युवती एडेलिना अबलुले भनेको यो समाचार बेलायती समाचार...
सेक्स गर्न उत्पात मन भएका युवतीले यसर...
असार १, 2076 काठमाडौँ । संसारभरि नै एउटा मान्यता छ, महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको व्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । महिलाले यौन चाहना पनि शब्दमै व्यक्त नगर्...
यो समयमा सेक्स गरे जति मज्जा अरु बेला...
असार १, 2076 काठमाडौँ । सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हुन्छ । एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कार...
यौन सम्पर्क शुरु हुनुअघि नै महिलालाई ...
जेष्ठ ३०, 2076 काठमाडौँ । यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ । यस विषयमा धेरै अध्यन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् । पछिल्लो पटक ...
कलेज पढ्ने युवतीको गोप्य सेक्स भिडियो...
जेष्ठ ३०, 2076 काठमाडौँ । कक्षा १२ मा अध्यानरत एक युवतीको गोप्य भिडियो बाहिरिएको छ । ती युवतीले आफ्नो प्रेमीसँगको गोप्य भिडियो लिक भएको हो । उक्त भिडियोमा महिलालाई असाध्यै मनपर्ने यौन आसन जस्तो देखिन्छ । उनीहरुले गोप्य कोठा भित्र एक अर्कालाई अगालो हालेका छन् ।...
यी राशी भएका महिलाले पुरुषलाई मोहित म...
जेष्ठ ३०, 2076 काठमाडौँ । व्यक्तिको जीवनमा निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । राशी अनुसार व्यक्तिको स्वभाव चरित्र र भविष्यलाई सजिलै नियाल्न सक्ने ज्योतिष शास्त्रले बताएको छ ।त्यस्तै कतिपय राशी भएका व्यक्तिहरु यस्तो हुन्छन् जसमा अन्य मानिसलाई सजिलै आर्कषण गर्न सक्ने शक्त...
संसारकै सबैभन्दा सुन्दरी नर्स, पुरुष ...
जेष्ठ २३, 2076 काठमाडौं । संसार कै सुन्दरी नर्स काम गर्न अस्पतालमा पुरष बिरामीको थेगी नसक्नु भीड हुने गरेको छ । ती सुन्दरी नर्स काम गर्न ताइवानको त्यो अस्पतालमा पुरुष बिरामीहरुको भीड हुने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । त्यती परुष बिरामीको भीड लाग्नुको कारण चाँही काम...
छोरीको कुमारीत्व बेच्ने आमा कस्ती होल...
जेष्ठ २२, 2076 काठमाडौं । नाबालिग छोरीको कुमारीत्व करिब २७ लाख रुपैयाँमा बेच्ने रुसकी इरिना ग्लादकिख हालै जेल परेकी छिन् । सौन्दर्य प्रतियोगितामा पनि भाग लिने गरेकी पूर्वसुन्दरी ३५ वर्षीया ग्लादकिख चेल्याबिन्स्क शहरकी बासिन्दा हुन् । उनले मस्कोनिवासी एक जना प्रह...